Firenena 20 ambony indrindra manana mponina tanora indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Na dia misy aza ny 'fihantsiana volo' ny mponina any amin'ny firenena sasany, ny faritra hafa amin'izao tontolo izao dia miaina ny fironana hafa. Ny fifanoherana misy eo amin'ny mponina tranainy indrindra sy tanora indrindra eran-tany dia tena mafy. Ireo firenena manana mponina be taona dia mirona ho mandroso ara-toekarena kokoa, ka miteraka sakafo tsara kokoa, tolotra ara-pahasalamana ary fanohanan'ny governemanta amin'ny fisotroan-dronono. Any amin'ireo firenena ireo, ny olona dia mihavitsy ny zaza ary miaina ela kokoa.
Any amin'ny tany mahantra kosa, ambony kokoa ny fahavokarana ary matetika ny olona no maty amin'ny fahatanorana noho ny ady na ny areti-mifindra sy ny fahasarotana mifandray amin'ny fiterahana. Ilaina ho an'ny governemantan'ny firenena manana mponina tanora kokoa ny manamora ny fidirana amin'ny fanabeazana sy ny fandrindram-piterahana ho an'ny olom-pireneny, ary mandresy lahatra ny olom-pireneny mba handinika indray ny fitsipika ara-kolontsaina momba ny haben'ny fianakaviana sy ny fandrindrana.
Ireo firenena manana mponina tanora dia manana fahafahana lehibe mialoha azy ireo. Ny mponina tanora kokoa dia midika ho mpiasa maro kokoa ho avy ary fahafahana bebe kokoa amin'ny fanavaozana sy ny fitomboana ara-toekarena. Mila asa sy fahafahana ara-toekarena ihany koa ireo tanora ireo rehefa mihalehibe izy ireo, ary, rehefa mitombo ny isan'ny mponina ao amin'ny fireneny, dia tsy ho safidy tsotra izao ny fanaparitahana izay harena kely efa misy.
Ireto ny firenena 20 ambony indrindra manana mponina tanora indrindra eran-tany.
% ny mponina latsaky ny 18 taona